Akụkọ - Wood Mackenzie: Ọnụ mmanụ dị elu nwere ike ịpụta nsogbu maka ịdọ aka na ntị dị n'elu
Wood Mackenzie: Ọnụ mmanụ dị elu nwere ike ịpụta nsogbu maka ịdọ aka na ntị dị n'elu
Na nlọghachi ya site na ndakpọ nke afọ 2020, ọnụ ahịa Brent jiri $ 70/bbl gbagoro. Ọnụ ahịa dị elu na 2021 pụtara ị nweta ego dị elu maka ndị na-emepụta ya, ikekwe ọbụlagodi ebe dị elu. Na gburugburu ebe a, ndụmọdụ gbasara akụ na ụba ụwa Osisi Mackenzie kwuru na ndị ọrụ kwesịrị ịkpachara anya.
"Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ihe karịrị $ 60/bbl ga-adị mma maka ndị na-arụ ọrụ karịa $ 40/bbl, ọ bụghị njem otu ụzọ," Greig Aitken, Onye ntụzi nke otu nyocha ụlọ ọrụ WoodMac. “E nwere nsogbu na -adịte aka nke onu oriri na mmefu ego. Ọzọkwa, ọnọdụ na -agbanwe agbanwe ga -eme ka mmezu atụmatụ bụrụ ihe siri ike, ọkachasị n'ihe metụtara ime azụmahịa. Na enwere nsogbu nke na-abịa na mbilite ọ bụla, mgbe ndị na-eketa oke malitere iwere nkuzi siri ike dịka echiche oge ochie. Nke a na-edugakarị n'ịme nnukwu ego na arụpụtaghị ihe. "
Mazị Aitken kwuru na ndị na -arụ ọrụ kwesịrị ịnọgide na -arụ ọrụ. Ụkpụrụ maka ihe ịga nke ọma na $ 40/bbl ka bụ atụmatụ nke ịga nke ọma mgbe ọnụ ahịa dị elu, mana enwere ọtụtụ okwu ndị ọrụ kwesịrị iburu n'uche. Maka otu, onu ogugu onu ogugu onu ogugu bu ihe kwesiri ekwesi. Wood Mackenzie kwuru na agbachapụla ọkọnọ ọkọnọ, ngwa ngwa nke ọrụ ga -agbachi ahịa ọsọ ọsọ na -eme ka ọnụ ahịa na -arị elu ngwa ngwa.
Nke abụọ, okwu mmefu ego nwere ike sie ike. Ọnụ ahịa mmanụ na -arị elu bụ isi ihe na -akpata ọgba aghara gbasara ego. Ọtụtụ usoro mmefu ego na -aga n'ihu ma guzobe iji bulie oke gọọmentị na ọnụ ahịa dị elu na akpaghị aka, mana ọtụtụ anaghị adị.
Mazị Aitken kwuru, "Arịrịọ maka 'oke oke' na -adịwanye elu na ọnụ ahịa dị elu, a gaghị ahụta ọnụ ahịa ike. “Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mmanụ na -eguzogide mgbanwe na usoro mmefu ego na iyi egwu itinye ego dị ala na obere ọrụ, nke a nwere ike imebi site na atụmatụ imebi ma ọ bụ iwe ihe akụ na mpaghara ụfọdụ. Ọnụ ego ụtụ dị elu, ụtụ isi ọhụrụ na -enweta uru, ọbụlagodi ụtụ carbon nwere ike na -eche na nku. ”
Ọnụ ahịa na -arị elu nwekwara ike ịhazigharị Pọtụfoliyo. Ọ bụ ezie na a na -ere ọtụtụ akụ, ọbụlagodi n'ụwa $ 60/bbl, ndị na -azụ ahịa ka ga -adị ụkọ. Mazị Aitken kwuru na ihe ngwọta nke enweghị mmiri mmiri adịghị agbanwe agbanwe. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnabata ọnụ ahịa ahịa, ree ihe ndị ka mma, tinye ihe ndapụta na nkwekọrịta ahụ, ma ọ bụ jigide.
"Ebe mmanụ dị elu na -arị elu, ka a na -elekwasị anya na ijigide akụ," ka o kwuru. “Inweta ọnụ ahịa ahịa dị ugbu a bụ mkpebi dị mfe mgbe ọnụ ahịa na ntụkwasị obi dị ala. Ọ na -esiwanye ike ịre akụ na ọnụ ahịa dị ala na gburugburu ọnụ ahịa ịrị elu. Akụ ndị ahụ na -emepụta ego na ndị na -arụ ọrụ nwere obere nrụgide ịre n'ihi mmụba ego ha na -abawanye na mgbanwe dị ukwuu. ”
Agbanyeghị, Pọtụfoliyo ọkwa ọkwa dị oke mkpa dị mkpa. Mazị Aitken kwuru, sị: “Ọ ga -esiri gị ike ijide ahịrị na ọnụ ahịa dị elu. Ụlọ ọrụ ekwuola ọtụtụ ihe gbasara ịdọ aka na ntị, na -elekwasị anya na mbelata ụgwọ na ịbawanye nkesa ndị na -ekenye ndị ọzọ. Ndị a bụ arụmụka dị mfe ịme mgbe mmanụ dị $ 50/bbl. A ga -anwale mkpebi a site n'ịhazigharị ọnụ ahịa ahịa, ịbawanye ego na ịkwalite mmetụta maka mpaghara mmanụ na gas. "
Ọ bụrụ na ọnụ ahịa jidere karịa $ 60/bbl, ọtụtụ ndị IOC nwere ike ịlaghachi azụ na mpaghara nkasi obi ego ha karịa ma ọ bụrụ na ọnụ ahịa dị $ 50/bbl. Nke a na -enye ohere dị ukwuu maka ịkwaga ohere n'ime ume ọhụrụ ma ọ bụ decarbonization. Mana enwere ike tinye nke a n'ọrụ itinye ego n'ime mmepe elu.
Ndị nọọrọ onwe ha nwere ike ịhụ uto ngwa ngwa na-alaghachi na agendas ha: ọtụtụ ndị nọọrọ onwe ha na United States nwere mmachi itinye ego itinye ego nke 70-80% nke mmefu ego na-arụ ọrụ. Mbelata bụ ebumnuche bụ isi maka ọtụtụ ụlọ ọrụ US nwere nnukwu ụgwọ, mana Maazị Aitken kwuru na nke a ka na-ahapụ ohere maka uto etinyere n'ime oke ego na-abawanye. Ọzọkwa, ọ bụ mmadụ ole na ole nọọrọ onwe ha na mba merela ụdị mgbanwe mgbanwe dị ka ndị isi. Ha enweghị ihe kpatara nke a iji wezuga ego sitere na mmanụ na gas.
“Enwere ike ibupu mpaghara a ọzọ? Ma ọ dịkarịa ala, ilekwasị anya na nkwụsi ike ga -enye ohere maka mkparịta ụka gbasara ịba ego. Ọ bụrụ na ahịa amaliteghachi uto na -akwụghachi ụgwọ, ọ ga -ekwe omume. Ọ nwere ike were ọtụtụ ụzọ rụpụta nsonaazụ siri ike iji nweta ihe, mana mpaghara mmanụ nwere akụkọ ihe mere eme nke ịbụ onye iro ya kacha njọ, ”Mr Aitken kwuru.
Oge ezipụ: Apr-23-2021